गुगल कोलाब वा गुगल कोलाबोरेटरी: यो के हो | नि: शुल्क हार्डवेयर
पक्कै पनि सुन्नु भएको छ Google कोलाबोरेटरी, Google Colab को रूपमा पनि चिनिन्छ, वा सायद यो पहिलो पटक हो कि तपाईंले उत्तर अमेरिकी कम्पनीको यस प्लेटफर्मको बारेमा पढ्नुभयो। यो हुन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यसको पछाडि के छ र यसले तपाइँको परियोजनाहरूमा योगदान गर्न सक्छ सबै कुरा, किनकि यसमा केहि धेरै रोचक विशेषताहरू छन्।
यो प्लेटफर्म विशेष गरी संसारसँग सम्बन्धित छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङर पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा...
1 गुगल कोलाबोरेटरी के हो?
2 Google Colab सुविधाहरू
गुगल कोलाबोरेटरी के हो?
गुगल कोलाबोरेटरी, वा कोलाब, यो गुगल अनुसन्धानबाट अर्को क्लाउड सेवा हो। यो एक IDE हो जसले कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई यसको सम्पादकमा स्रोत कोड लेख्न र ब्राउजरबाट चलाउन अनुमति दिन्छ। विशेष रूपमा, यसले पाइथन प्रोग्रामिङ भाषालाई समर्थन गर्दछ, र मेसिन लर्निङ कार्यहरू, डेटा विश्लेषण, शैक्षिक परियोजनाहरू, आदिमा केन्द्रित छ।
यो सेवा, आधारित Jupyter नोटबुक, होस्ट गरिएको छ तपाईको GMail खाताको साथ पूर्ण रूपमा निःशुल्क, र यसलाई कुनै कन्फिगरेसन आवश्यक पर्दैन, न त तपाईंले Jupyter डाउनलोड वा स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको कोड सम्पादन गर्न र परीक्षण गर्न सक्षम हुन कम्प्युटिङ स्रोतहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै यसको सर्भरहरूको GPGPUs, आदि। स्पष्ट रूपमा, केहि नि: शुल्कको रूपमा, Google Colaboratory सँग असीमित स्रोतहरू छैनन् न त तिनीहरूको ग्यारेन्टी छ, तर तिनीहरू प्रणालीलाई दिइने प्रयोग अनुसार भिन्न हुन्छन्। यदि तपाइँ यी प्रतिबन्धहरू हटाउन र थप प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले तिर्नुपर्नेछ Colab Pro वा Pro + सदस्यता.
तपाईंले आफ्नो खातामार्फत Colab पहुँच गर्दा तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको भर्चुअल मेसिन हो जहाँ तपाईं आफ्नो कोड अन्य प्रयोगकर्ता र स्रोतहरूबाट अलग गरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण, यदि तपाइँसँग समस्या छ भने तपाइँ भर्चुअल मेसिनलाई मूल अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। यसले यो पनि संकेत गर्छ कि यदि तपाइँ तपाइँको MV मा केहि कोडहरू कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ ब्राउजर बन्द गर्नुहुन्छ भने, मेसिनहरू निष्क्रियताको अवधि पछि स्रोतहरू खाली गर्न हटाइनेछन्। यद्यपि, यदि तपाईंले तिनीहरूलाई बचत गर्नुभयो भने तपाईंसँग आफ्ना नोटबुकहरू GDrive मा हुनेछन्, वा तपाईंले तिनीहरूलाई स्थानीय रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ (खुला स्रोत Jupyter ढाँचा .ipynb)।
Google Colab सुविधाहरू
जब तपाइँ गुगल कोलाबोरेटरीमा पहुँच गर्नुहुन्छ तपाइँ एक फेला पार्नुहुनेछ मैत्री, सहज र प्रयोग गर्न सजिलो वातावरण। वास्तवमा, यसमा कागजातहरू र मद्दतको साथ एक अनुक्रमणिका छ, साथै केही उदाहरणहरू तपाईंको पहिलो चरणहरू लिन सुरु गर्न, पहिले नै बनाइएका कोडहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र परीक्षणमा जानुहोस्।
entre कार्यहरु गुगल कोलाबोरेटरीका सबैभन्दा प्रमुख हुन्:
पाइथन कोड सम्पादन र चलाउनुहोस्।
गुगल ड्राइभ (GDrive) मा आफ्नो परियोजनाहरू भण्डारण गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूलाई हराउन नदिनुहोस्।
GitHub बाट कोडहरू अपलोड गर्नुहोस्।
नोटबुकहरू साझेदारी गर्नुहोस् (पाठ, कोड, परिणाम र टिप्पणीहरू)।
तपाईं Jupyter वा IPython नोटबुकहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
GDrive बाट स्थानीयमा कुनै पनि Colab नोटबुक डाउनलोड गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » सामान्य » गुगल कोलाब वा गुगल कोलाबोरेटरी: यो के हो
प्रोग्रामिङ: डाटा प्रकार